ओली नेतृत्वको सरकार अहिले सम्मकै सबै भन्दा अर्कमण्ड ! – रकम चेम्जोङ -
ओली नेतृत्वको सरकार अहिले सम्मकै सबै भन्दा अर्कमण्ड ! – रकम चेम्जोङ
२५ मंसिर,काठमाडौं। जनता समाज बादी पाटीका केन्द्रय कार्यकारीणि सदस्य एवम् विदेश विभाग प्रमुख रकम चेम्जोङले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिले सम्मकै सबै भन्दा अर्कमण्ड भएको बताउनु भएको छ । धनकुटामा आज पत्रकारहरु संग कुरा गर्दे नेता चेम्जोङले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले बर्तमान सरकार हरेक कुराले असफल भएको भन्दै सरकार मात्र सरकारमा बसेर रबैया मात्र गरेको बताउँनु भयो । कोभिड संकटको बेला जनताको सुरक्षमा सरकार उदाशीन भएको भन्दै सरकारले लिनु पर्ने दायित्व बाट समेत सरकार भागेको बताउँनु भयो ।
फरक प्रशंगमा बोल्दै नेता चेम्जोङले जनमत बाटै सबै कुरा परिवर्तन गर्ने सकिने बताउँदै व्याक्तिहत्या बाट राजनिती सफल नहुँने बताउँनु भयो । पाटी समायोजनाका काम ले गर्दा सरकारको रबैयाको विरुधमा पाटीले सरकारको विरुद्धमा सशक्त काम गर्न नसकेको उहाँको भनाई थियो । राजावादीहरुको आन्दोलनले अब राजतन्त्र नर्फकिने बताउँदै उहाँले केहि शक्तिले जनातको निराहा लाई मोड्न यस्ता गतिविधी गरेको बताउँनु भयो ।
Previous खुसि हुदै स्वेता खड्काले भनिन ‘मैले सिउँदोमा सिन्दुर भरेँ’
Next कोरोना समुदायस्तरमै तिब्र गतिमा देखिएपछि विद्यालय १० दिनका लागि बन्द